Vaovao Samihafa Archives - Page 3 sur 215 -
DJ 9 sy Mpanakanto 8 amin’ny « Big Bounce » Toerana iray mahasarika ireo tanora rehefa faran’ny taona ny CASK PK 0 etsy Soarano. Mpisokoka kapila 9 sy mpanakanto mivohy ny mozika ankehitriny 8 no …Tohiny
Tiaray : Hitondra hafatra ao anaty mozika
Na dia maro aza ireo mpanakanto vao misondrotra, misy ihany ireo miavaka amin’izy ireo. Raha saika mirona amin’ny mozika mafana na ireo mozikan’ny tanan-dehibe ny ankamaroan’izy ireo, dia karazana gadona hafa kosa no nofidian’i Tiaray. …Tohiny
Farahtiana Church : Hira fiderana amin’ny gadona ankehitriny
Mpanakanto nivoaka tamin’ny Pazzapa andiany faha-4. Taona maro taty aoriana vao nivoaka tamin’ny fahanginany Randriamiandrisoa Faratiana? ka hamoaka ny rakikirany voalohany. Farahtiana Church no anarana hisalorany eo amin’ny sehatry ny mozika, ny hira fiderana amin’ny …Tohiny
Andiany faha-8 : Nahasarika ireo tanora ny « Manga Mania Festival »
Nanomboka omaly ary haharitra hatramin’ny sabotsy ho avy izao. Nahasarika tanora maro ny « Manga Mania Festival », izay tanterahina etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano. Asehon’ireo trano heva 65 sy ireo hetsika fanentanana samihafa manodidina ny …Tohiny